၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၏အကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်နာရီများ Androidsis ပါ
ဟိုဆေး Alfocea | | တရုတ် Android, စမတ်နာရီ
မင်းစဉ်းစားနေတယ် မင်းရဲ့စမတ်နာရီဟောင်းကိုအသစ်ပြန်လုပ်ပါ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပိုမိုခေတ်မီ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းရှိသော်လည်းသင်အိတ်ကပ်ထဲမဝင်လိုသောကြောင့်လား။ Smartwatch ရှိခြင်း၏စိတ်ကူးကိုသင်နှစ်သက်ပါသလား။ သို့သော်သင်က၎င်းကိုအကောင်းဆုံးရတော့မည်ဟုယုံကြည်နေဆဲမဟုတ် မင်းကငွေအများကြီးမရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ဘူး အတွေ့အကြုံလား သင်သည်ဤအခြေအနေနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိပါကသင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးနေရာသို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ယနေ့ Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်သင်နှင့်အဆိုပြုချက်တစ်ခုယူဆောင်လာသည် အကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်နာရီ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိသည်မှာစမတ်နာရီများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်အခြားနည်းပညာပစ္စည်းများသည်များသောအားဖြင့်တရုတ်ထုတ်ကုန်များ (သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့် Oriental) ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ပြုလုပ်သောတရုတ်စမတ်နာရီများကိုရည်ညွှန်းပြီးတရုတ်မှကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့်ရောင်းချသည်။ ပြီးတော့သင်စိတ်ကူးကြည့်လို့ရတယ် ပုံမှန်အတိုင်းထက်အတန်ငယ်စျေးနှုန်းချိုသာ smartwatchငါပြီးသားငါပြောပေမယ့်ကျနော်တို့ကစျေးနှုန်းအားဖြင့်သိပ်လမ်းညွှန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုနေသည့်အဘယ်မော်ဒယ်များကိုသိလိုပါသနည်း။ ကောင်းပြီဆက်ဖတ်ပါ
1.4 IWO ၃
ECG စမတ်နာရီ၊ သွေး ...
ANDUBEST စမတ်နာရီ, ...
Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုပြသရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြပြီး၊ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာငွေကြေးပိုမိုကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးရှိသူများ၊ သို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များနည်းတူစျေးသက်သာသောတရုတ်စမတ်နာရီများ။ သိသာထင်ရှားသည့်အချက်များမှာအဆိုပြုချက်များသာဖြစ်ပြီး၊ သင်စိတ်ကူးနိုင်သလောက်စျေးကွက်တွင်ရှိသည့်မော်ဒယ်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမသိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ လစဉ်လတိုင်းမော်ဒယ်လ်အသစ်များ၊ စျေးကွက်တွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောနာရီများ၏မွမ်းမံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းကိုပင်မရည်ရွယ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်များပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်၊ စမ်းသပ်၊ အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကမ်းလှမ်းသည် အကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်နာရီ ထိုကဲ့သို့သောသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်း, သူတို့ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသောပစ္စည်း, သူတို့ရဲ့ခုခံခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်, အာရုံခံကိရိယာများနှင့်နောက်ဆုံးမှာအချို့စမတ်နာရီကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အတော်လေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်အဖြစ်စံအပေါ်အခြေခံပြီး, ဤနေရာတွင်လည်းသင်မည်သို့ပြသ ဂတရုတ်စမတ်နာရီ onfigure ဒါကြောင့်သင်ကချက်ချင်းသင်လက်ခံရရှိအဖြစ်ပြproblemsနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ado မရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ရန်ကြကုန်အံ့။
ဒါဟာသင့်အတွက်သိပ်ပြီးအသံမပေါက်နိုင်ဘူး၊ No.1 D5 + es ငွေတန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် သင်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရှာဖွေနိုင်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးကတော့၎င်းကိုအသုံးပြုသူများကအလွန်တန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။
No.1 D5 + သည်လှပပြီးဆန်းကြယ်သောဒီဇိုင်းရှိသည်။ သတ္တုကိုယ်ထည် ၁.၃ လက်မအရွယ် IPS မျက်နှာပြင်နှင့် ၃၆၀ x ၃၆၀ resolution တို့ပါ ၀ င်သည်။ အတွင်းဘက်တွင် 1,3 GB RAM memory နှင့်အတူ Mediatek MTK360 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည်။ GB အထိသိုလှောငျ 8 ပြည်တွင်းရေး။ ၇၈ ဂရမ်သာအလေးချိန်ရှိပြီး၊ 450 mAh ဘက်ထရီ သင်တစ်နာရီကြာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြင့်၎င်းသည်သင်၏နာရီအားသင်အသုံးပြုသောအသုံးပြုမှုအပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ ထူးခြားသောအခြားအချက်တစ်ခုမှာ SIM ကဒ်အထိုင်ပါဝင်သည် 3G ဆက်သွယ်မှု သင်၏စမတ်ဖုန်းသည်အိမ်၌ပင်ရှိနေလျှင်ပင်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ GPS၊ နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာသည်ဤစမတ်နာရီကိုဖြည့်စွက်သည့်အစိတ်အပိုင်းအချို့အပြင်ထို့အပြင်ဖြစ်သည် ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေခံနိုင်ရည်ရှိသည်.
သင်အချို့သည်ကျွန်ုပ် No.1 D5 + နှင့်လှော်ပြီးထင်သည်ဟုထင်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်နာရီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။ လျော်ကြေးပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခုန်ကျော်ခြင်းကို ပို၍ စျေးသက်သက်သာသာဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်းအရည်အသွေးကောင်းများကိုပြုလုပ်သည် NeeCoo V3တစ် ဦး နှင့်အတူစမတ်နာရီ အလွန်ကြော့ဒီဇိုင်း Android ထုတ်ကုန်များနှင့် iPhone နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော (မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်အလူမီနီယမ်အလွိုင်း) သားရေကြိုးနှင့် ၁.၃ လက်မအရွယ် IPS ဖန်သားပြင်၊ 1,3 x 240 Resolution, Bluetooth 240၊ 380 mAh ဘက်ထရီ။ ၎င်းသည်အလေးချိန် ၆၄ ဂရမ်သာရှိပြီးရေစိုခံနိုင်မှုမရှိသော်လည်းယူရို ၇၀ အောက်သာကျသင့်သောဈေးနှုန်းရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကာယလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီးအသိပေးချက်များနှင့်အခြားအရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်စမတ်နာရီရှိခြင်းသို့မဟုတ်မရှိသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများသူနှင့်ဘတ်ဂျက်ပိုမိုတင်းကြပ်သောသူများအတွက်။ MallTEK ဘာရနိုင်လဲ ရုံ 25 ယူရိုသည်။ ၎င်းသည် Apple Watch နှင့်ဆင်တူသည်မှာထင်ရှားပြီး၎င်းသည်အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှု။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီ MallTEK ကို SIM ကဒ်နဲ့သုံးနိုင်တယ်၊ စမတ်ဖုန်းကိုဘေးဖယ်ထားပေမယ့် ၂၄၀ x ၂၄၀ resolution ရှိတဲ့ ၁.၅၄ လက်မမျက်နှာပြင်၊ 380 mAh ဘက်ထရီကင်မရာနှင့် ၆၂ ဂရမ်သာအလေးချိန်ရှိသည်။ စမတ်နာရီထဲကိုဝင်ချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကမင်းကိုသုံးချပ်၊ ငွေ၊ အနက်ရောင်နဲ့ပန်းရောင်တွေမှာရနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ပန်းသီးနာရီ၏ဒီဇိုင်းကိုသင်နှစ်သက်ပြီး အကယ်၍ သင်သည် Cupertino လူများတောင်းသောအရာကိုမသုံးစွဲလိုပါက IWO ၃ ဟုတ်ပါတယ်၊ Apple Watch ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပွားတစ်ခုပါ၊ ဒီဘက်မှာ Digital Crown အပါအ ၀ င်။ ၎င်းသည် iOS နှင့် Android စမတ်ဖုန်းများနှင့်အဆင်ပြေသည်။ 1,54 လက်မအရွယ် IPS မျက်နှာပြင်နှင့် 240 x 240 resolution တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် MediaTek MTK2502C ပရိုဆက်ဆာပါဝင်ပြီး RAM 138 MB၊ သိုလှောင်မှုနှင့် ၆၄ MB သိုလှောင်မှုနှင့်ဘက်ထရီ ၃၅၀ mAh ရှိသည်။ ဒါဟာ Apple Watch အတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်အများကြီးနိမ့်သည်ကိုထင်ရှားသည်, သို့သော်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုစဉ်းစားအတော်လေးယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အပြင်းအထန်တောင်းဆိုတယ်၊ ဒါကတရုတ်စမတ်နာရီပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းထက်ပိုမိုဒီဇိုင်းကိုရှာသောသူတို့အဘို့အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သော သင်သည်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးအသိပေးချက်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
ပို၍ ပြည့်စုံသည်မှာဤပန်းသီးလက်ပတ်နာရီတွင်ပင်ပါဝင်သည် ကင်မရာနှင့်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှု အနီးအနားမှာသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းမရှိရင်တောင်ဆက်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူအနည်းငယ်သာသိရှိနိုင်သည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ယူရို ၇၀ ပဲကျန်တဲ့ ၁.၅၄ လက်မအရွယ် 1,54D IPS မျက်နှာပြင်နဲ့ resolution 2.5x x 240 ပါပါတယ်။ 320 mAh ဘက်ထရီ, Bluetooth 4.0, Mediatek MTK2502 ပရိုဆက်ဆာသည် iPhone နှင့် Android စမတ်ဖုန်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
အခုကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာကတရုတ်စမတ်နာရီနှစ်ခုအကြောင်းအရင်ပြောခဲ့သလိုစျေးသိပ်မကြီးပေမယ့်အကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်နာရီ ၂ ခုပါ ၀ င်တာသေချာတယ်၊ တကယ်တော့သူတို့အကြောင်းသူတို့တစ်ခါတစ်ရံမှာပြောပြီးပြီ။
ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်သည် LEMFO LEM5တစ်နာရီ ကြံ့ခိုင်အသွင်အပြင်နှင့်မြို့ပတ်ရထားဒီဇိုင်း ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်သက်တာရှိသည့်ထိုနာရီများစွာကိုသတိပေးသည့် side ခလုတ်သုံးခုပါရှိသည်။ ၁.၃၉ လက်မ IPS မျက်နှာပြင်နှင့် resolution 1,39 x 400 ရှိပြီး Mediatek MTK400 ပရိုဆက်ဆာနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုထားသည်။ RAM 1 GB နှင့်သိုလှောင်မှု 8 GB အတွင်းပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သင်နှင့်အတူတေးဂီတအမြောက်အများကိုသင်အမြဲသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ အလေးချိန် ၈၉ ဂရမ်သာရှိပြီး၊ 450 mAh ဘက်ထရီ y 3G ဆက်သွယ်မှု ဒါဆိုမင်းရဲ့စမတ်ဖုန်းအပြင်ဘက်မှာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ GPS၊ နှလုံးခုန်နှုန်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကသူဟာအရည်အသွေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာနာရီတစ်လုံးဖြစ်ပြီးအရင်တွေထက်အများကြီးပိုမြင့်ပါတယ်။ No.1 D5 + line မှာဒီရွေးချယ်မှုကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စျေးနှုန်းကလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဒီကိုတွေ့ယခင်တူညီသောအရည်အသွေးတူ၏လိုင်း၌ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းမော်ဒယ်သည် Lemfo Lem5 ထက်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတွင် RAM နှင့်သိုလှောင်မှုတစ်ဝက်ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 512 MB နှင့်4GB အသီးသီး။ ဒါဟာအနိမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်, 400 mAh ဘက်ထရီ ဒါပေမယ့်သူ့မျက်နှာသာအတွက်သူတစ် ဦး ရှိပါတယ်2MP ကင်မရာ အလေးချိန် ၆၅ ဂရမ်သာပေါ့ပြီးအနည်းငယ်ပေါ့ပါးစေသည်။ ပရိုဆက်ဆာသည် Mediatek MTK65 နှင့်အတူတူပင်ရှိပြီး၎င်းတွင်လည်းရှိသည် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှု.
အကယ်၍ အသုံးဝင်မှုအပြင်သင်သည်ကြော့ရှင်းမှုကိုရှာနေလျှင်၊ Rwatch R11 သငျသညျပေါက်ကွဲမှုပေးခြင်းမရှိဘဲမင်္ဂလာဆောင်နှင့်အစည်းအဝေးများတွင်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အလွန်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းကိုပေးထားသည် အတော်လေးဂန္နှင့်ကြော့ပုံစံနှင့်သိုင်းကြိုး။ ၎င်းသည် Moto 360 နှင့်ဆင်တူပြီးသုံးစွဲသူအများစုအတွက်လုံလောက်သောစွမ်းဆောင်ချက်အနည်းငယ်ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် Mediatek MTK2501 ပရိုဆက်ဆာ၊ 128 MB RAM၊ 64 MB ROM 32 MB အထိထောက်ပံ့ပေးထားပြီး 3.0 GB အထိထောက်ပံ့နိုင်သည်။ NFC, Bluetooth 450 ဆက်သွယ်မှု၊ XNUMX mAh ဘက်ထရီ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာနှင့် iPhone နှင့် Android တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ သတိထားပါ၊ ရေစိုခံမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီနာရီဟာသင့်အတွက်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကငါနှစ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်းရှိပြီး (အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်)၊ စျေးနှုန်းထက်ယူရို ၅၀ ကျော်သာရှိတယ်။ အကြောင်း Rubility KW18အလေးချိန် ၆၈ ဂရမ်သာရှိပြီးအပြီးသတ်သုံးချပ်၊ ၁.၃ လက်မမျက်နှာပြင်၊ Mediatek MTK68 ပရိုဆက်ဆာ၊ 1,3 MB RAM၊ Bluetooth 2502, 64 mAh ဘက်ထရီ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ၊ iOS နှင့် Android နှင့်ရေစိုခံနိုင်သော၊ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုmicroSD ကဒ်ကိုထောက်ပံ့သည်။
အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်စမတ်နာရီများ (သို့မဟုတ်အခြားတရုတ်ထုတ်ကုန်များ) အကြောင်းပြောသောအခါစျေးပေါ။ အရည်အသွေးညံ့သောထုတ်ကုန်များကိုအလိုအလျောက်စဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းယင်းသည်အဖြစ်မှန်ထက်လူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။ တရုတ်စမတ်နာရီများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာသည်မှန်သော်လည်းစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမှာလည်းကျယ်ပြန့်သည် ဒီတော့သော့ချက်ကစမတ်နာရီကိုဘာတွေသုံးမလဲဆိုတာကိုသိဖို့ပဲ။ နေ့စဉ်သုံးစွဲမှုကိုပေးမယ်၊ စမတ်ဖုန်းကိုအမှီအခိုကင်းကင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်စတာတွေကိုသိဖို့ပဲ။
အဘယ်အရာကို တရုတ်စမတ်နာရီ စာရင်းထဲထည့်မလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » စမတ်နာရီ » အကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်နာရီများ
အားကစားနာရီတွေဖြစ်ပြီး GPS နဲ့စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ bip နဲ့အရှိန်ကိုငါထပ်ထည့်မယ်
Domino DM368 Plus ဘယ်မှာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် Finow X5 AIR လား။
ဖော်ပြထားသော KW18 သည်မူရင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် KingWear k1w8 ဖြစ်သည်
Lemfo kW 10, သူတို့ကိုငါပြောင်းချင်လို့လား။ ငါမေးလား
ငါ APPLE ထက်အခြားစမတ်နာရီရှာနေတာပါ။ ECG -Electrocardiogram- (ဆေးခန်းအတည်ပြုပြီး) တွင် Xiaomi တွင် Samsung ကဲ့သို့သောဤလုပ်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုထားကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။
အိန်ဂျယ် del Valle
angel del valle အားပြန်ပြောပါ
ဥပမာ SIM mini ပါသော 4G Smartwatch သည်အင်တာနက်ကို "Wi-Fi မှတစ်ဆင့် Mac mini ကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာသို့" အင်တာနက်ပေးနိုင်သလား။
ဆိုလိုသည်မှာ 4G Smartwatch နှင့် SIM ကဒ်ပါရှိပါကသင်သည်ဖုန်းနှင့်အတူတူပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Samsung ၏ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌဂျေးယီလီအားထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်
Google Pixel2တွင်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ရှိပြီး Snapdragon 836 ဖြင့်ရောက်ရှိမည်